धर्म, प्रचण्ड र क्रियाकर्म | Citizen Post News
धर्म, प्रचण्ड र क्रियाकर्म
२०७४ मंसिर १५ गते ०९:३८
महाभारतमा आफ्नो छोरालाई आफ्नै छोराले राज्यको लागि मार्दा कुन्ती मुकदर्शक थिइन् र पनि हामी हिन्दुसमाज कुन्तीलाई महानमाता मानेर पुज्दछौं । राज्यनीति अन्र्तगत जेठो दाजु कर्णलाई भाइ अर्जुनले युद्धमा अपरिचित अवस्थामा मार्दछन् । राज्यनीति, युद्धनीति, धर्मनीति हामी हिन्दुजनको समाज व्यवस्थाको मूलस्तम्भ हो । यसका आधारमा भएका कर्महरू हाम्रो लागि स्तुत्य हुन्छन् । तर राज्यनीति र युद्धनीति कहिलेकाहीँ पेचिलो भएर उपस्थित हुन्छ । राज्यहरुको सुरुवातदेखि आजसम्म यी नीतिलाई स्वानुकूल अवलम्बन र प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर धर्मनीतिको मूलभावनामा राज्यनीति र युद्धनीति सञ्चालन हुनुपर्दछ । बहुजनसुखाय एकको दुःख धर्मनीतिले स्वीकार गर्छ भने एक जनसुखाय बहुजन दुःखको कार्यलाई तिरस्कार किन ? महाभारतको त्यत्रो नरसंग्रामलाई पुज्ने पुजकले नेपालको सत्र हजारको नरबलीलाई किन तुच्छ ठान्ने ? वा एक जनसुखायमा टेकेको भएर वा धर्मको स्थान नभएर ।
प्रचण्डले युद्धको दुन्दुभि बजाउँदा जुन जनसुखको राग अलापेका थिए, त्यो एउटा नीति र सिद्धान्तमा टेकेरै गाएका थिए । बहुजनसुखाय र सर्बे भवन्तु सुखिनको सपनालाई साकार पार्ने दृढताले ओतिएका थिए । अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, षड्यन्त्र, जाली तमसुक त्यो समयको गहना थियो । त्यसलाई हटाई समतामुलक राज्यव्यवस्थाको लागि संकल्पित थिए । माओ र लेलिनका ठेली पढेर राज्याधिकार साम्य हुनुपर्छ भन्ने बुझे तर हाम्रो धर्मनीति र वेदध्वनिको भावगुञ्जन सुन्नै पाएनन् । समाजमा हिन्दुधर्मभीरुको रुपमा स्वर्ग र नर्कको टिकट बेच्न बसेका ठेगदारहरु देखे । तिनीहरुको व्यवहार हेरेर आफुले गर्न खोजेको र देखेको सपना आफ्नै संस्कृतिका वेद पुराणको परिकल्पना हुनसक्छन् भन्ने कल्पनै गरेनन् । वेद पुराणका मन्त्रले बाहुनबादको भजन गाएको देखे । गरीव दलितको घरमा मान्छे मर्दा वेदका मन्त्र पढ्ने बाउनले उन्नाईसबाट बीस गाई बनाएको देखे । हातमा माला र निधारमा चन्दन धस्नेले वेदको सहारा लिई कुकर्म मात्र गरेको देखेका प्रचण्डले आज आफ्नो सन्तानको देहावसानमा तिनै मालाधारी ठेगदारको कथन अनुसार क्रियाकर्म गरिदिनु पर्ने ?
हाम्रो वेदमा तीन भाग छ जसलाई काण्ड भनिन्छ । कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड र ज्ञानकाण्ड । यी तीनवटा सिँढी हुन् उत्तमोत्तम क्रममा एकबाट अर्कोमा पुग्नको लागि । सत्कर्म गरेर शुद्ध भएको मनलाई एकत्रित गरी ज्ञान दिनु वेदको प्रयास र प्रतिज्ञा हो । आँखा, कानजस्ता इन्द्रियले समेत कसैको नराम्रो देख्न, सुन्न नपरोस् राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गहरु सवल होउन् भन्दै प्रकृति, वातावरण, अन्तरिक्षको कल्याण चाहने वेदले मानव जीवनको शोषण गरेको देखाई प्रचण्डलाई छोराको क्रियाकर्मबाट समेत बिरक्त गराउनु आज क्रियाकर्म गरेन भनेर डुक्रिने धर्म साँढेहरुको अक्षम्य अपराध हो न कि प्रचण्डको । छोरा प्रकाशको आत्माले धर्मका ठेकेदारलाई ठुग्नेछ प्रचण्डको परिवारलाई होइन । ज्ञानको विशाल भण्डारलाई कर्मकाण्डको वेदीमा आहुति दिएपछि धर्मको नाममा हामीसँग लोभलालच र कमजोर संस्कारमात्र बाँकी रहन्छ जसलाई आजको चमकदार भौतिकताले अवश्य निल्दछ । नेपालको इतिहासमा सधै विजेताको गीत गाउन थालियो । विजेताले धर्मको अनुशरण होइन धर्मले विजेताको अनुशरण गर्न थाल्यो । विजयीलाई रामको स्वरूप पराजयीलाई रावण देख्यो धर्मले । धार्मिक दलालहरुले कुनै बेला प्रचण्डलाई राम बनाए, कुनै बेला रावण । मानिस बन्न कहिलै नपाएको पात्र हो प्रचण्ड । धर्मलाई धमिरा बनेर कोतर्नेले अरुलाई अधार्मिक देखे । गरूड पुराणको नाममा सारोद्धारका घर जग्गा सम्पत्ति दान नगरे नरक बास हुन्छ भन्ने सोह्र अध्यायनै विशाल वैदिक वाङ्मयको एकमात्र दर्शन बन्यो । वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण ग्रन्थका भाव र तात्पर्य नविचारी क्रियालोप भए अगति पर्छ भन्नु रक्सी र भैसीको सुकुटी पचाउन भट्टीमा चलाइने महान तर्क मात्र हुन् ।
गरुण पुराणमा लेखेको क्रियाकर्म नगर्दा प्रचण्डको अधोगति हुन्छ भने त्यही लेखेको क्रियाकर्म गराउने ब्राह्मण सर्वदा अपवित्र हुन्छ भन्ने कुरा नमान्नेहरुको के गति हुने नि । असली गरुड पुराण कहाँ छ कस्तो छ केही थाहा नहुनेवाट धर्मको नाममा शोषित हुनु भन्दा प्रचण्डको भौतिकवादमा पिल्सिनु मानवको लागि श्रेयस्कर हुन्छ । हिन्दु धर्म भनेको कर्मकाण्ड मात्र कि कर्मकाण्ड पनि भन्ने विषय सोचनीय छ । कर्मकाण्ड हामीसँग भएका मध्येको सवैभन्दा तुच्छ र सरल प्रक्रिया हो यसबाट धर्म प्राप्ति हुदैन, यो कर्तव्य हो, कर्म हो । यही नै हाम्रो दर्शन होइन । यसले हामीलाई तल झर्नबाट रोक्छ तर माथि लान सक्दैन । त्यसैले हाम्रो धर्मदर्शनको कर्मकाण्डरुपी दियो मात्र देखार प्रचण्डजस्ता भौतिकवादीलाई आकर्षित गर्न सकिन्न । गीता, उपनिषद र वेदरुपी सूर्य प्रकाशले भौतिकतालाई डढाउनु पर्दछ । क्रियाकर्म शोकसँग सम्बन्धित विधि हो । भावको कर्म हो । श्रद्धाको अनुशीलन हो । जीवनको पद्धति हो । जीवनमा हामीलाई सानो सहयोग पनि कसैले गर्छ भने त्यसप्रति अनुगृहित हुनुपर्दछ । क्रिया त्यसैको नमुना हो । प्रकासको आत्मालाई बोकेर त्यो शरीरले प्रचण्डलाई धेरै सहयोग गरेकोछ, त्यसैले त्यो शरीरप्रति नतमस्तक प्रचण्ड हुनै पर्थ्यो । मरेको शरीरले के अनुभव गर्छ र त्यसलाई सम्मान भन्ने कुरा पिताको दागबत्तिमा समेत सुटबुटमा उपस्थित हुने प्रचण्डको मनमा पक्कै आउँछ । माटो, पानी, तेज, हावा र आकासको भौतिक संयोजन शरीर भएकोले भौतिकवादलाई अँगालेको मानिसले भौतिक शरीरको अपमान विरोधाभसपूर्ण हुन्छ ।
भौतिकवादीहरुले शरीरको उपभोग गर्ने हुँदा झन् शरीरको सम्मान गर्नुपर्छ, अध्यात्मवादीले त शरीरको उपयोगमात्र गर्ने हो । ऋषि परम्परामा मृत्युसुतकको निर्णय व्यक्तिलाई निष्क्रिय बनाउन नभै उनुपलब्धीमूलक शोकको समयलाई कसरी उपलव्धीमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने समय सदुपयोगको व्यवहारमा आश्रीत भई क्रियाविधान गरिएको हो, ब्राह्मणको घरमा गाईको संख्या बढाउँन होइन । पुत्रको मृत्यु कष्टहरुको राजा हो । यो समयमा कुनै पनि मातापिता शोकको त्यो अवस्थामा पुग्छन् जसलाई हेर्दा र सम्झदा पनि जो कोही भावविह्वल बन्दछन् । त्यो हृदयविदीर्ण हुने समयमा पनि कुनै मातापिता शोकलाई जितेर कर्तव्य व्यापारमा लाग्न सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो मातृपितृ र सन्तान वात्सल्यले भरिपूर्ण पूर्वीय वाङ्मयको कल्पना इतरको क्रिया हो । सत्र हजारको मृत्युमा मिलेको भर्खरको मार्क्सवाद र लेलीनवादको एकताबद्ध व्याख्या आज मुण्डेमुण्डे मतिर्भिन्ना भएझै सर्वप्राचीन वैदिकपद्धतिको व्याख्या स्वमहिमा मण्डित व्याख्याताबाट व्याख्यीत हुँदा दोषयुक्त हुनु अनौठो पक्कै नहोला । तर धर्मनीतिलाई राज्यनीति जति सरल र मनोवाञ्छीत प्रवाह निषेध हुने हुँदा धर्म धेरै सम्हालिनु पर्दछ । धर्म नभएको राज्यनीति हुन्छन्, दानवराज्य सत्ययुगमा पनि थिए, तर ती पनि स्वजातीय पद्धतिमा चल्थे, आजका विकसित भनिएका मुलुकमा धर्म नभए पनि स्वपद्धति सवैका छन् । मृत्युपछिको शोकको कष्ट सवैको सादृशी हुने हुँदा मृत्युपरान्तका कर्म सवै भूगोल र जातिले अवलम्बन गरेका छन् ।
कुनै अन्र्तरार्ष्ट्रिय शोकसभामा अरु देशका राष्ट्रप्रमुखले अनौपचारिक वार्तालापमा आआफ्नो देशको मृत्युपरान्त गरिने कर्मका बारेमा चर्चा गर्दा जनक, बुद्ध र किराँतको संस्कारले भरिपूर्ण देशका नेता प्रचण्ड अवाक् बन्नु नपरोस् । अप्ठ्यारो छ, धेरैको कोख रित्याएको अपजस भोगी रहेका प्रचण्डलाई आफ्नो सन्तानको मृत्युमा धीत मरुञ्जेल रुउन्, तर कुन्ती कर्णको मृत्युपछि रोएर महानमाता बनिन्, युधिष्ठिरले विशाल शत्रुसेनाको शोक बारेर कोख रित्तिएका आमाहरुको मन जिते । त्यसैले शोकलाई ज्ञानको जनक मानेर रित्तिएका कोखहरुसँग सँगै बसेर सन्तानको मृत्युपीडा इमान्दार पूर्वक बाँडै प्रकाशको मृत्यु सम्पूर्ण नेपाली मातापिताको छोराको मृत्यु बन्ने थियो र राजनीतिक रुपमा पनि महान् छलाङ् सावित हुनेछ । लेखक: (सञ्जु घिमिरे-सिमराजितपुर-१८ वारा)
बस्ती स्तरमा सिकाई अभियान
२०७४ असोज ३० गते १५:५१